VIDEO-Somaliland oo xalay Hotel kuyaal Laascaanood kala baxday Abukar Cawaale saakana Garoowe u tarxiishay
October 28, 2020 Xuseen 4
Ciidanka ammaanka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa habeenimadii xalay Hotel uu degan yahay ku weeraray Weriye Abuukar Cawaale oo ku magac dheer Qaad-diid oo maalinimadii shalay ahayd gaarey Laascaanood.
Abukar Cawaale, ayaa saqdii dhexe ee xalay ciidanku kala bexeen Hotel uu ka deganaa Laascaanood iyagoona u dhaaciyey xabsiga dhexe ee magaalada halkaasi oo ay aroortii hore ee saaka kaga soo qaadeen gaari nooca ciidanka ah.
Weriyahaan u ololeeya la dagaalanka qaadka ayaa waxaa saaka la keenay Tukaraq iyadoona gaari loo soo saaray maagalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana sidoo kale gaari la soo saaray wiil weriye ah oo kala shaqaynayey ololaha la dagaalanka qaadka.
Askartaasi qaad bey u fadhiyeen murqaanku kaga ciyaaray
Anigoo ah muwaadin u dhashay Jamhuuriyada Barakaysan Somaliland maan jeclaysan in Abokor xiligaa la mirto waana khalad.waxay ahayd in hiirta waaberi lala sugo kadib la waraysto haduu arimo aan khusayn dalka somaliland faraha la galo in markaa laga celiyo ama la tarxiilo.
Abokor si joogto ah ayuu u yimaadaa somaliland aniga ayaa mar diyaarad kasoo wada Raacnay Addis.
Aniga iyo sugida iyo Ilaalinta Qaranka Somaliland waa biyo kama dhibcaan, iyadoo taasna la barbar wado qadarinta iyo sharafta muwaadinka iyo qofka Somaliland ah ee walaalkeen ah ee aan wax dhib ah inoo wadin.
Guul iyo Gobonimo viva Rep of somaliland.
Qaadqaad buu meel walba la taagan yahay, maxaa geeyey asaga? walee waa laguu naxariistay.
Anigu inkasta oon jecelahay inaanan cidnaba lagu xad gudbin oo saqdhexe iska daayoo aanan hadh cad xitaa juuq loo odhan, hadana ninkan arinta ku dhacday u garaabi maayo. Waayo hore ayaa loogu digay inuu Laaska yimaado. Hargeysa doorkii hore ee uu waxan waday waxa lagu yidhi jooji dabadeedna xagaas iyo Muqdisho ayuu kala dhacay.
Waxan iyo wacyiga uu wadaana kuma salaysna barnaajimka laga soo shaqeeyay oo tifatiran ee waa wax uu meelahaas la dhex marmaro. Muqdisho oo kale waxaynu arkeyna isagoo magaalada dhex socda oo hablaha ku leh, qaad ama guur dooro iyo wax sidaas la mid ah oo maalaayacnimo uun iska ah.
Hadafka uu leeyahay haduu yahay waxaan doonayaa inaan sameeyo barnaamijyo wacdi gelin ah oo buuran dee hasoo maro qeybaha kala duwan ee Dawladaha Soomaaliyeed ee uu damacsan yahay inuu wacyi gelinta ka dhex sameeyo. Qorshaha haku darsado oo dad la shaqeeya oo waxan la riixa ha doonto. Xeerarka Dawlada wax inuu ka badalo oo uu wax cusub keeno weeye. Laakiinse suuqa ayaan iska dhex cararayaa oon dadkaan su’aalo weydiinayaa oo yutube ka ayaan soo dhigayaa anigu uma arko waxaan ka aheyn caanimo doon.
Kol hadaanu wax macno leh oo laga soo shaqeeyay la shir imaneyn. Kol hadaanu Dawlada soo mareyn oo isagoo la ogol yahay imaneyn. Kol hadii isaga oo looga sii digay inuu yimaado Laaska uuu iska yimid isagoo sifooyin kale oo qalooca adeegsanaya. Anigu waxaan leeyahay wuu istaahilaa in magaalada laga saaro oo la wadanka laga mastaafuriyo.